OS X Version 10.9.2 to 10.9.5 - MYSTERY ZILLION
OS X Version 10.9.2 to 10.9.5
September 2014 in iOS Devlopment
Xcode6update လုပ်ဖို့အတွက် OS X Version ကို update လုပ်နေတာပါ။ update ဆွဲနေတုန်း error alert ထွက် ထွက်လာတယ်။ ဒါပေမယ့် connection မကောင်းလို့ပဲလို့ ထင်ပြီး သတိမထားမိဘူး။ အခု update ဆွဲတာပြီးသွားလို့ install လဲ လုပ်ရော လုပ်လို့ မရဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ restart ချခိုင်းလို့ ချပေမယ့် installed မဖြစ်သွားဘူး။ ညီမက App Store ကနေ update လုပ်နေတာပါ။ error alert ကိုလဲ သေချာမကြည့်လိုက်မိဘူး။ "update version can't combined your apple server (1001)" ဆိုလားပဲ။ အဲဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါအုံးရှင်။
You can download from http://support.apple.com/kb/DL1760 without app store
ဟင် ပြန်downရတော့မယ် အရမ်းကြာလို့။Xcode6က beta ပဲ ထွက်သေးတာလားဟင်။
XCode6is not beta, it's already available on App Store.
dmg file ကို ဘယ်မှာ down လို့ရမလဲဟင်။
Ooop, if you mean 6.1, yes it's beta. On App Store is 6.0.1. You can find 6.0.1 dmg under the following URL:
Xcode 6.0.1 is available in App Store.
Xcode 6.1 is beta and require Yosemite